Waxay u bixisay kellideeda – wayna guursatay! | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Faallooyinka August 19, 2017	0 276 Views
Muqdisho (Himilonews) – Waxa aan ku tilmaami karaa ficilkii ugu deeqsinimada iyo naxariista badnaa damiirka bani’aadamka oo ay adag tahay in badan oo naga mid ah in ay sameeyaan xattaa haddii aan leenahay damiir naxariiseed oo lamid ah kan Sagal, waxa ayna dheer tahay geesinimada iyo dhiiranaanta oo ah wax loo dhasho.
Sagal Cabdi Xasan oo Soomaali arday jaamacadeed ah ayaa mid kamid ah kelyaheeda u saartay Maxamed Cali Xasan oo ay ilmo adeer yihiin.
Sanadkii 2016, waxa uu ka xanuunsaday kelyaha, waxaa durba isaga oo garab ka helaya qoyskiisa iyo qaraabadiisa ay bilaabeen in xaaladdiisa caafimaad lala tacaalo, laakiin nasiib darro waxaa baaba’ay rajooyinkii uu ku soo kabsan karay, markii dhaqaatiirta ay sheegeen in uu u baahan yahay qof kelli u bixiya.
Waxa uu intaa kadib galay xaalad aan igaga baahneyn in aan sharraxaad ka bixiyo oo qof walba oo qoraalkan aqrisanaya dareemi karo sida uu noqon lahaa isaga qudhiisa haddii ay qabsan laheyd arrintan.
Si kasta oo qofka uu iimaan u leeyahay, una aaminsan yahay qadarta Alle ee – qeyr iyo sharba – waxaa xaqiiqa ah in nafta ay kuu sheekeynayso; tusaale yar ka soo qaad, mararka aad xanuunsato, sidee naftaada ay kuugu sheekeysaa? sidee dareentaa marka aad marto baaritaan caafimaad adiga oo xanuunsan walina sugaya jawaabta ama natiijada baaritaanka? Mahad ahaan, aad baan uga walwalaa; marxaladaasi, haddaba ka soo qaad in natiijada ay noqotay – Alle kama dhigee – mid laga deyriyay laguuna sheegay in aan waxba laga qaban karin! Dareenka markaas ku gali lahaa ayaa ah midka uu dareemay Maxamed.
Dabeecadda bani’aadamka uu u abuuran yahay waxaa kamid ah in uusan illoobin waligii qof caawiyay isaga oo dhibaataysan, waa marka qofka ugu yaraan uu inooga baahan yahay hadal dhiirri-gelin ah oo niyaddiisa dhisi kara. Sagal Maxamed ayaa noqotay qofka uusan Maxamed marna sida aan filayo iloobi doonin, waxa ay u bixisay mid kamid ah kelyaheeda!!
Waa laga yaabaa in dadka qaar ay yiraahdaan waa ilmo adeertii oo walaashiis ah, wey u bixin kartaa. Adiga kelli ma u bixin kartaa qof aad ilmo adeer tihiin xattaa walaashaa? Jawaabtaasi adiga ayaan kuu daayay.
Waxaa hubaal ah in Sagal ay sameysay ficil aan la wada sameyn karin oo ay yar tahay inta awoodo, waxaa kale oo aan shaki ku jirin inay qaadatay go’aan qatar caafimaad uga imaan karto; Alle kuma keenee – Aamiin. Laakiin waxaa intaa oo dhan uga muhiimsan fursadda nololeed ee Eebe kasokow ay siisay Maxamed.
Sheekada Sagal ay kellida ugu deeqday, waxa ay ahayd sanadkii hore, laakiin waxa caan ka dhigay sheekada ayaa ah markii ay haddana qaadatay go’aan kale oo dad badan soo jiitay, aniga qudheydana aad ula dhacay una arkay in uu mudan yahay in wax laga qoro.
Waxa ay guursatay Maxamed, oo markii hore ay kelli u bixisay oo ay nolosha kula midowday. Waana midda keentay in aad loogu hambalyeeyo nolosha cusub iyo halgankii ka horreeyay oo ay isla soo mareen.
Labaduba waa Soomaali, laakiinse ku nool dalka Qatar kana soo kabtay qaliinkii caafimaad oo ay mareen. Hadda waxaa u bilaabatay nolol cusub oo waliba aad u qurux badan. Iyada oo ka hadleysay muuqaal la soo dhigay facebook, waxa ay xustay in ay ku faraxsan tahay nolosha Maxamed, islamarkaana go’aanka ay iyada qaadatay.
Waxa aan ka dheehday kalsooni badan markii ay hadleysay, wayna dhoolla-caddeynaysay mararka qaar. Waxaan leeyahay hambalyo, si gaar Sagal waxa aad muujisay damiirka naxariiseed iyo midka damqasho oo aan leennahay haddaa nahay Soomaali.
Ma ficilkii ugu horreeyay baa Soomaalida?
Maya ma ahan markii ugu horreysay oo waxaa sanadkii 2015, Asma ay u bixisay aabaheed oo ah Shiikh caan ah – Aadan Siiro, mid kamid ah kelyaheeda markii uu xanuunsaday. Waxa ay ka dhigan tahay in dumarkeenna ay yihiin kuwa ku sifoobay naxariista iyo damqashada oo ah waxa uu Ilaahay ku beeray innagana aan ku jeclaano mar walba.
Qore: Mahad Maxamed Cali.
Kala xiriir: farriin-danabeed; mahat335@gmail.com.
Maqaalkan waxaa markiisii hore lagu daabacay mareegta radiohimilo.so
Previous: Haweeney gudaafad ka dhex heshay lacag dhan $180,000
Next: Geedka ugu dheer adduunka
La kulan – Gabadha aan muuqaalkeedu is-beddelin muddo 20 sano ah!
Sidee ugu habboon oo Qof sooman u samayn karaa Jirdhis iyo Jimicsi?!